MPU —- EASi | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » MPU —- EASi
MPU —- EASi
Posted by Khaing Khaing on Jun 19, 2013 in Creative Writing, Think Different | 21 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်ကပေ့ါ ….. ကျွန်မက မီးဖွားတော့မှာဆိုဒေါ့ ငွေရစရာရှိတာတွေကို ကျွန်မဆီ တကူးတက လာပေးစရာမလိုအောင် ကျွန်မလည်း လက်ထဲမှာ ငွေရှိရင် သုံးဖြစ်မှာစိုးလို့ အားလုံးအဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး MPU လိုခေါ်တဲ့ SMART ကဒ်လေးကို ဘဏ်တစ်ခုမှာ ဖွင့်ထားမိတယ် …. ဒါပေမယ့် အဲဒီကဒ်လေးကို မသုံးခဲ့မိဘူး …. မနေ့က လက်ထဲမှာရှိတဲ့ ငွေတွေက ဟောင်းနေတာရယ် အတန်ကြီးတွေဖြစ်နေတာကြောင့် ကဒ်ထဲကိုထည့်ဖို့ ဘဏ်ကိုချီတက်ခဲ့မိတယ် … ငွေထည့်ပြီး ဘဏ်က၀န်ထမ်းတွေက အမအောက်ကစက်မှာ ငွေအမောက် စစ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မလည်း ကဒ်လုပ်ပြီး တစ်ခါမှ မသုံးဖူးတာကြောင့် စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ အောက်ကိုဆင်းခဲ့မိတယ် …. အောက်က စက်မှာ ငွေအမောက်စစ် ကြည့်တယ် အိုကေပဲ … နောက်ပြီး အပြင်ကလည်းထပ်သွားစရာရှိ ငွေကလည်း လက်ထဲအနည်းငယ် သာရှိတာကြောင့် ငွေထုတ်ဖူးအောင်ဆိုပြီး ကဒ်ထဲကငွေတွေကို ထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်မိတယ် ဘဏ်က ၀န်ထမ်းကလည်း ကျွန်မကိုသေချာသင်ပေးပါတယ် … ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက ငွေကမထွက်လာဘူး …….. (၃) (၄) ခါလောက် ကြိုးစားထုတ်ပေမယ့် လိုင်းအောက်နေတယ်ဆိုလားပဲ ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း သွားစရာရှိတော့ မစောင့်တော့ပဲ ထိုဘဏ်ကနေ တပ်ဆုတ်လာခဲ့တယ် … ညနေစောင်းအိမ်ရောက်တော့ ကျွန်မလက်ထဲ ငွေက တစ်ပြားမှ မကျန်တော့ဘူး … ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း အိမ်နားမှာရှိတဲ့ Junction Zawana ကိုချီတက်ပြီး ငွေထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာပေ့ါ …. ထပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက စက်မှာ စာပေါ်နေတယ် … တောင်းပါတယ် လူကြီးမင်းအတွက် ၀န်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ပါတဲ့ …….. ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ထိုစင်တာက ၀န်ထမ်းတွေကို မေးကြည့်မိတယ် ငွေထုတ်လို့မရဘူးလားလို့ သူတို့က တစ်ခြားဘဏ်တစ်ခုက စက်ကိုညွှန်ပြတယ် အဲစက်နဲ့တော့ ထုတ်လို့ရခဲ့ပါတယ် …. ဒါပေမယ့် ကျွန်မငွေသွင်းထားတဲ့ ဘဏ်ကစက်မဟုတ်တော့ ၀န်ဆောင်ခပေးရတော့မှာပေ့ါ …. ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် … အဲဒီကဒ်ကို ကိုင်မသုံးတော့ဘူးလို့ … ငွေထုတ်ရတာ အဆင်မပြေဘူး … ကိုယ့်မှာငွေကုန်နေရင်လည်း ချက်ချင်းရမယ်လို့ အာမခံချက်မရှိဘူး … မနေ့က ကျွန်မဇောချွေးတောင်ပြန်ခဲ့ရတယ် …. ငွေထုတ်လို့မရခဲ့ရင် စင်တာရှေ့ကပဲ ပြန်လှည့်လာရမှာလေ …. ကျွန်မအသိတစ်ယောက်ကလည်းပြောတယ် …. ညဘက်ထုတ်တာတောင် လိုင်းကမကောင်းလို့ ငွေမထွက်လာဘူးတဲ့ …. တစ်ခါတစ်လေ ငွေက စက်ထဲမှာ ကုန်နေတာနဲ့တောင် တိုးတယ်တဲ့ …… မြန်မာပြည်မှာ MPU – EASi ကဒ်တွေကို ဘဏ်ပိုင်ရှင်တွေက လူထုတွေကြားမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုဖို့ အစည်းအဝေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် … ဒါပေမယ့် ယခုလိုငွေထုတ်စက်တွေ အရည်အသွေးမကောင်းတာနဲ့တော့ ထိုကဒ်တွေကို အသုံးပြုဖို့ တော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ် ….
အဲ့သလောက်တောင် အဆင်ပြေချောမွတ်နေမှတော့ လူတိုင်းသုံးသင့်ပေတာပေါ့….
အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ
ထည့်ထားတဲ့ပိုက်ဆံကို လွယ်လွယ်ထုတ်မရတော့ လွယ်လွယ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့…..
စုမိဆောင်းမိဖြစ်အောင် စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်………
ကျုပ်လည်း စုဗူးနဲ့ ငွေဆုမယ့်အစား စမတ်ကဒ်လေး တစ်ခုလောက်ဖွင့်ထားပီး
ဟုတ်တယ်နော် … အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကြည့်ရင်စေတနာတွေပေ့ါ ………
ဘယ် ဘဏ်လဲ နံမည်သာ ထည့်ပြောပါကွာ ..
ဒါဟာ မုန်းလို့ မဟုတ် သူတို့ ၀န်ဆောင်မှု့ တိုးတက်စေချင်လို့ ဆိုတာ သိမှာပါ .
သက်တန့် တံဆိပ်လေးပါတယ်လေ … အဲဘဏ်ပေ့ါ ……..
ကိုမင်းမင်းရေ …… မနေ့က လက်ထဲမှာ ငွေက ၁၅၀ ပဲကျန်တာနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းက ကမ္ဘောဇဘဏ်က ငွေထုတ်စက်မှာ ထုတ်လိုက်တယ် … ချောချောမောမောပဲရခဲ့ပါတယ် …. နောက်ပြီး AGD စက်မှာ သွားစမ်းထုတ်တော့ မရဘူးဗျ …. အဲဒါနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ Junction Zawana က ကျွန်မ ငွေသွင်းထားတဲ့ ဘဏ်က စက်ကိုသွားထုတ်တာ ရတယ်ဗျ … ဒါနဲ့ပဲ ရှိသမျှပိုက်ဆံကိုအကုန်ထုတ်လိုက်တော့တယ် …. သူတို့စက်ထဲထားပြီး လိုတဲ့အချိန်မှာမရရင် ကိုယ်က စိတ်သောကရောက်ရဦးမှာလေ ……..
” မနေ့က လက်ထဲမှာ ငွေက ၁၅၀ ပဲကျန်တာနဲ့ ”
ခိုင်ခိုင်ရယ် ၊ ဖစ်မှ ဖစ်ရလေ ၊ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး ။
အဘ လည်း ရန်ကုန်က ATM စက်တွေ ရဲ့ လုံခြုံရေးကို မယုံတာနှင့် ၊
အဘ ရဲ့ Master Card လေးနှင့် မြန်မာ ငွေ စမ်းထုတ်ကြည့်ဘို့ဟာ ၊
မလုပ်ရဲသေးဘူး ၊ ဖြစ်နေတယ် ။
ဖြစ်ရမယ်အဘဖောရေ …. သမီးလည်း လမ်းမှာတွေးရင်းတွေးရင်းစိတ်မချတာတွေများတော့ ပိုက်ဆံတွေအကုန်ထုတ်ပလိုက်တယ် … သူတို့ကဒ်လုပ်တုန်းက ဘဏ်စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာပါ့မယ့်ဆိုဒေ့ါ … မတော်လို့များတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံရှိစုမဲ့စုလေးတွေ ကုန်သွားမှာလေ …… အဘလည်းလျှောက်မစမ်းနဲ့ တစ်ခုခုဆို ကိုယ်ပဲခံရမှာ ….
စကားအတင်းစပ် … အဘဖောရေ … အခုဘယ်လှေပေါ်မှာလဲ … ပင်လယ်ပျော့ကို အဘဖောရဲ့လှေမှာလုပ်အားပေးခေါ်ပါလား …. အဘကြားထားတယ်မှတ်လား… သမီးတို့အလုပ်အကြောင်းကို ……….
ဟိုတခါအဲဒီကဒ်အတွက် ကားခအတော်ကုန်သွားဖူးပါတယ်။ ဒီစက်လိုင်းအောက်လို့ ဟိုဘဏ်ပြေး။ မရ။ နောက်ဒီဘဏ်ပြေးနဲ့။ ပိုက်ဆံလဲရရော Taxi ဖိုးလဲအတော်ပါသွားရော။ နောက်ဆိုသေချာအောင် ကိုယ့်ဘီဒိုထဲပဲထားတော့တယ်။ မောလဲမမော Taxi ဖိုးလဲမကုန်။
မမသဲနဲ့တူတယ် …. ရွာထဲမ၀င်တာကြာတော့ နံမည်တွေပြောင်းထားရင်မသိဘူး …. မမတို့လို လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေက အဲဒီလိုအခက်အခဲရှိခဲ့တာတွေ စောစောကသာပြောပြခဲ့ရင် ညီမကမလုပ်ပါဘူး … ခုတော့ မနေ့က သူများဘဏ်ကစက်တွေမှာ လိုက်ထုတ်တာ ၀န်ဆောင်ခတွေအဖြတ်ခံရတယ် …. အဟင့် နှမြောလိုက်တာ …. မမသဲလိုသာ ကုန်ရင်ညီမကတော့ တက်သေနိုင်တယ် …
မှန်ပါတယ် မသဲပါ။ သမီးလေးတွေနေကောင်းလား။ ဘဏ်မှာထားရင်စာအုပ်ကမှနဲနဲတော်အုံးမယ်။ ဒါတောင်နော် ငွေသွားသွင်းရင် ပိုက်ဆံကအပိုဆောင်သွားရသေး။ ဟိုအတန်မရဘူး ဒီပိုက်ဆံလက် မခံဘူးနဲ့ လဲလဲပေးရသေးတယ် ( အင်းဝဘဏ် )။ ဘဏ်တခုကပိုက်ဆံ အဲဒီအထုပ်မပျက်အပ် တာတောင်လိုလိုနေ တတ်သေးတာပါသေး။ လွယ်ပါဘူးအေ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမ်းတာပဲအေးတယ်။ ရိုးမကအဆိုးဆုံး။ ငွေအပ် ငွေလွှဲ ဘယ်လောက်သေချာအောင်ရီသွားရီသွား သူတို့ဆီရောက်ရင် အမြဲ သုံးလေးရွက်လိုနေတာချည်းပဲ။ ထုပ်ရင်လဲ အိမ်ရောက်ရင် သုံးလေးထုပ်လောက်တော့ တရွက်လျော့လျော့နေတတ်တယ်။
မမသဲရေ …. ဘဏ်တွေကို အယုံအကြည်လည်းမရှိဘူး …. နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်မှာ ဘဏ်မှာအပ်ရလောက်အောင်လည်း ငွေအတိုင်းအတာမရှိတာလည်းပါတာပေ့ါ …. လိုရင် သွားထုတ်ရတာ စာရင်းဇယားလည်းရှုပ်တယ် …. တစ်ခုခုဆို ဒေ၀ါလီခံတာတို့ဘာတို့ကြားရင် ရင်တုန်ရ ….. ကိုယ်က များများသွင်းပေမယ့် ပြန်ထုတ်တော့ လိုသလိုမရ ဒါတွေကထိကထားများတာကြောင့် ညီမမှာတော့ ဘဏ်စာအုပ်တစ်အုပ်မှ မရှိပါဘူး ………. မမသဲလို ငွေတွေလျော့တယ် ဘာတယ်ဆို ဒီကလည်း ခံမှာမဟုတ်ဘူး …… အခုလို ပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါ မမသဲ …….
အင်းဒါပေမယ့် တစ်ခုလောက်တော့ အားမနာတန်းပြောချင်တယ်….
အခုမခိုင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို အဲဒီဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ. အဲလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း သွားပြောပြရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ….
အဲဒီတော့ သူတို.လဲ ပြင်သင့်တာပြင် လုပ်ဆောင်သင့်တာလုပ်ကြမှာပါ…
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မခိုင်တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးနော်… အားလုံးအားလုံး လူတွေက ၀န်ဆောင်မှုညံ့ရင် ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လူကို ညံ့ရင်ညံ့ကြောင်း မပြောရဲဘဲ…. စားသုံးသူအချင်းချင်း အပြစ်ပြောကြတော့ ကျွန်တော်တို.ဆီက ၀န်ဆောင်မှုတွေက ညံ့လို.မသုံး မသုံးတော့မပြင် မပြင်တော့ ညံ့ ညံ့ပြီးရင်းညံ့ ဆိုတာဖြစ်နေတော့တာပေါ့…
အဲဒီတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်က ညံ့ရင်ညံ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောရဲအောင် လုပ်ထားသင့်တာပေါ့ဗျာ…
အေ …ကောင်မပုရေ … ညည်းကြိုဆိုတာ ကျေးဇူးပါအေ … ကျုပ်လားမပြောပဲနေမှာ …. အဲဒီနေ့ကလည်း ကျုပ်ငွေထည့်တဲ့ဘဏ်မှာ အောက်ထပ်ရောက်တာနဲ့ တခါတည်းငွေထုတ်တာ … သူတို့သိတာပဲ သူတို့စက်အဆင်မပြေတာကို …. ကျုပ်က complain ထပ်မတက်တာက အဲနေ့က ကျုပ်အရေးတကြီးသွားစရာရှိနေတယ်လေ …. ကျုပ်မနေ့က ဘဏ်ရုံးချုပ်ကို ဖုန်းဆက်ပြောပြီးပြီအေ …. သူတို့ကပြောတယ်အေ …. လိုင်းကျနေတာတဲ့ ကဲဘာတတ်နိုင်လဲ …. သူတို့စက်မကောင်းတာပျက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ….
အဲဒီ MPU ကဒ်ပေါ့….
အဟုတ်အောက်မေ့လို့ တစ်ခါက မြေနီကုန်းစီတီမတ်မှာ ငွေထုတ်တယ် … မရဘူး..
အဲဒါ အဲဒီသက်တန့်စက်ဝိုင်းခြမ်းလေးနဲ့ဘဏ်ရုံးချုပ် ကဒ် ဌာနကို (ကြုံတုန်း) ကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တယ်…
ဆာကူရာဆေးရုံကစက်မှာလဲ နှစ်ခါထုတ်ကြည့်ပြီးပြီ – တစ်ခါမှ မရဘူး…။
တော်ကြာ ကဒ်ပါညပ်သွားပြီး ပြန်မထွက်ရင် အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့…..
ဦးဦးပါလေရာရေ … ဆာကူရာဆေးရုံကစက်မှာ ထုတ်တာဆိုဒေ့ါ …. ဆေးရုံကို ကိစ္စရှိလို့ သွားရင်းထုတ်တာလား …. အခုလို အရေးပေါ်နေရာတွေက စက်တွေက ချို့ယွင်းတာ မကောင်းဘူးနော် …. ကိုယ်က စက်တွေကိုယုံကြည်အားကိုးပြီး ငွေအနည်းငယ်သာ ထည့်သွားရင် စိတ်ပူပန်သောကရောက်ပြီး ဇောချွေးပြန်ရဦးမယ် …. တော်ပါပြီး တောဆန်တယ်ဘဲပြောပြော ငွေထုတ်ကိုင်သွားတာပဲကောင်းပါတယ် ….
ဒါတောင် ဘဏ်အသိုင်းအ၀ိုင်းကပြောသေးတယ် မြန်မာပြည်သူလူထုတွေက ပိုက်ဆံကိုကိုင်ပြီး လူအထင်ကြီးအောင် လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်တဲ့ Smart card တွေကို သုံးဖို့ သိပ်အားမသန်ဘူးတဲ့ … သူတို့စက်စနစ်တွေက တော်တော်ကောင်းတာကို ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲရအောင် ……..
ကျွန်တော်တို့တော့ ရှင်းတယ် ၊ ဘာကဒ်မှရှိဘူး အေးရော။ အကြွေးဝယ်လို့ ရပြီး စိတ်ချမှ လုပ်တော့မယ် ခိခိ၊ ဒါနဲ့ မခိုင်ခိုင် ရေ ဘာမှတော့ဆိုင်ပါဘူးဗျာ ကရိကထ များတယ်လို့ သုံးတာပါဗျာ ကထိက ကြီးက ဘာလို့ထ ထနေတာလဲတော့ သိဘူးဗျ၊
ဟီး …. ရေးချင်ဇောနဲ့မှားတွားတယ် …. ပြင်ပြောပေးတာ ကျေးကျေးပါနော် …..
အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းရင်လဲ ထုတ်လို့ မရဘူးတဲ့ဗျ
ကျုပ်လဲ ထည့်ထားသမျှလေး ပြန်ထုတ်ထားဦးမှပါပဲ
ဘာတွေထည့်ထားတာလဲ … မြန်မြန်သာထုတ် လုံခြုံတဲ့နေရာတော့ သွားထုတ်ဗျို့ …. ကိုပေကြီး …….